Samsung dia mamoaka amin'ny fomba ofisialy ny Galaxy Watch Active any Espana | Androidsis
Tamin'ny faran'ny volana febroary, tamin'ny hetsika nomanin'ny Samsung dia namela anay vokatra maromaro izy ireo, anisan'izany ny famantaranandron'izy ireo vaovao amin'ity taona ity. Momba ny Galaxy Watch Active, izay maneho fanavaozana manan-danja ho an'ny orinasa koreana, araka ny efa hitantsika tamin'ny famelabelarany. Ary farany, ity famantaranandro vaovao avy amin'ny marika Koreana ity dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy tany Espana, araka ny nandrasana.
Samsung dia nametraka tamin'ny fomba ofisialy ity Galaxy Watch Active ity. Ny famantaranandro dia natomboka tamin'ny loko isan-karazany, izay naseho tamin'ny androny. Afaka mifidy ny mainty, ny volafotsy, ny raozy ary ny maitso ny mpampiasa. Ireo loko rehetra amin'ny marika Koreana ireo dia natomboka tany Espana.
Ny iray amin'ireo lafiny izay ny marika Koreana tsy nilaza tamin'ny androny hoe ny vidin'ity famantaranandro ity hitranga amin'ny fandefasana azy io. Na dia teo aza ny fandehan'ny fotoana dia afaka nahafantatra ity angona vaovao ity izahay. Ohatrinona ny vidin'ity famantaranandro vaovao ity amin'ny vola be any Espana? Ny vidiny dia ofisialy ihany amin'ny farany.
Ireo mpampiasa liana amin'ny Galaxy Watch Active dia tsy maintsymandoa 249 euro Izy irery. Ny vidiny ahitantsika amidy an'ity famantaranandro ity any Amazon, efa amin'ny fomba ofisialy. Ka dia famantaranandro miaraka amina vidiny izay antenaina, amin'ny fiheverana ireo fanovana natolotra.
Samsung mitazona manatsara ny varotrao amin'ny sehatry ny akanjo miaraka amin'ity Galaxy Watch Active ity. Fanombohana lehibe ho an'ny orinasa izy io. Drafitra nohavaozina, ankoatry ny fampidirana fanatsarana isan-karazany ao aminy dia zavatra tokony hanampy an'io. Na dia ny mpanjifa aza izao no manapa-kevitra.
Amin'izao fotoana izao, raha mipetraka any Espana ianao ary liana amin'ity Galaxy Watch Active ity dia efa azonao atao ny mividy azy amin'ny fomba ofisialy. Ho an'ny 249 dia efa manana an'ity smartwatch vaovao ity ianao an'ny marika Koreana. Ahoana ny hevitrao momba ity famataranandro ity? Hanjary fahombiazana ho an'ny marika ve izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Tonga any Espana ny Samsung Galaxy Watch Active
Hisy Razer Phone 3 amin'ity taona ity
Tany araka izay azonao atao any Mars, Venus ary planeta hafa ao amin'ny Lander Pilot